November 2020 - Amawpyay
သစ်ခုတ်သမားက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ သစ်ခုတ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူနဲ့ လက်သမားဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ ​အပြန်အလှန်ကျေးဇူးတရာ ဆက်စပ်ပုံကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ယနေ့အချိန်ထိ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင် တာဟာ သဘာဝတရားရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကြောင့်ပါ။ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိသမျှသက်ရှိ သက်မဲ့ အရာအားလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဥပမာ သစ်ပင်တွေရှိလို့ နွေအခါ အရိပ်ရ ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ မရှိတော့ရင် နွေအခါပူပါမယ် သစ်ပင်တွေ လုံးဝမရှိတော့ရင်တော့ အောက်စီဂျင် ပျက်တောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေပါ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာ အမှန်ပါ။ အဲ့လိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ဒီကမ္ဘာကြီးက ရှိသမျှအရာအားလုံး အပြန်အလှန် မှီခိုနေပါတယ်။ ကဲ…သစ်ခုတ်သမားအကြောင်းလေး ဆက်လိုက်ရအောင် တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ …
ကပ်ရောဂါ အပေါင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်မည့် တန်ခိုးကြီး ဂါထာတော် ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကလည်း ကျောက်ရောဂါ၊ ပုလိပ်ရောဂါ၊ ဝမ်းရောဂါ အစရှိသဖြင့် ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ တရွာလုံး ရွာလုံးကျွတ် ကူးကုန်ပြီးလူတွ အကုန်သေကြသတဲ့ လူတွေသေတော့ မကောင်းဆိုးရွားတွေ ပျော်တာပေါ့ သူတို့ တွေ ပျော်မြူးပြီး ရွာတွေထဲ ဝင်လာကြသတဲ့ ရွာတွေ ထဲက လူတချို့လည်း တခြားလွတ်ရာ ရှောင်တဲ့ လူကရှောင် ပြောင်းတဲ့လူက ပြောင်းပေါ့။ အဲလိုနဲ့ ရွာတွေဟာ တစပြင် လို အကုန် လူခြေ တိတ်ပြီး ခြောက်ကပ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာတော့ တဲစုတ်စုတ် အိမ်လေး တစ်အိမ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေ ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘဲ အ …
၈သောင်းကျော်ရှိတဲ့ ပိဋကတ် သုံးပုံကို သစ်သားဖြင့် ရေးထွင်းထားသော ကြည်ညိုဖွယ်ရာနေရာ
၈သောင်းကျော်ရှိတဲ့ ပိဋကတ် သုံးပုံကို သစ်သားဖြင့် ရေးထွင်းထားသော ကြည်ညိုဖွယ်ရာနေရာ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှ ကုသိုလ်တော်ဘုရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပိဋကတ်ကျောက်စာချပ်ပေါင်း ၇၂၉ ချပ် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတာပါ။ ကုသိုလ်တော် ဘုရားလိုမျိုး ဗုဒ္ဓပိဋကတ်စာပေတွေ ရေးထိုးထား တဲ့နေရာ တခုဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်း ရှိနေပါ တယ်နော်။ အဲဒီနေရာကိုတော့ Tripitaka Koreana လို့ လူသိများပြီးတော့ ပိဋကတ် ၈သောင်း လို့လည်းခေါ်ကြ ပါတယ်နော်။ ဒီနေရာရဲ့ အကြောင်းကို မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Tripitaka Koreana လို့ခေါ်တဲ့ ဒီနေရာကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း Gyeongsang ပြည်နယ်ရှိ Gaya တောင်စောင်းက ဟိန်းဆာ ဗုဒ္ဓဘာသာ …
ဆံသဆရာ အတွေးနဲ့ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူတို့ တွေ့ကြသောအခါ
ဆံသဆရာ အတွေးနဲ့ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူတို့ တွေ့ကြသောအခါ ဆံသဆရာ နဲ့သူ့ ဖောက်သည်တို့် ဆံပင်ညှပ်ရင်း စကားပြောနေ ကြတယ်။ ဆံသ ဆရာက ပြောတယ်။ “ဘုရားတကယ် မရှိပါဘူးဗျာ။” ဆံပင်ညှပ် ခံနေသူက အံသြစွာ နဲ့ပြန်ပြောတယ် “ဘာလို့လည်းဗျာ” “ဒီကနေ့ ခေတ် အနေအထားကိုကြည့် လေ။ ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေ ၊ ဘေးဒုက္ခ ရောက်နေသူတွေ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်နေ ကြသူတွေ ၊သံဃာတောင် မဘသ မဟန နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ ဘုရားသာ တကယ်ရှိရင် ဒါမျိုးတွေ ဘယ်ဖြစ်လိမ့်မလဲဗျာ။ ဆံပင် ညှပ်ခံသူဟာ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ပဲ ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ ဆိုင်ပြင်ဘက် လမ်းပေါ် မှာ ဆံပင်ရှည် စုတ်ဖွား မုတ်ဆိတ်မွေး နှုတ်ခမ်းမွှေး …
Denko၊ PT Power၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူ၊ Max Energy စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် လူနာတင်ယာဉ်များ စက်သုံးဆီအခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပြီ
Denko၊ PT Power၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူ၊ Max Energy စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် လူနာတင်ယာဉ်များ စက်သုံးဆီအခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပြီ ယနေ့မှ စ၍ လူနာတင်ယာဉ်များ စက်သုံးဆီ အခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်ပြီ လူနာတင်ယာဉ်များ အခမဲ့ စက်သုံးဆီ ထုတ်ယူခွင့် ရယူနိုင်ရန် အတွက် Denko၊ PT Power၊ ရွှေဗျိုင်းဖြူ၊ Max Energy စက်သုံးဆီ ဆိုင်များနှင့် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း၏ စက်သုံးဆီ အခမဲ့ ထုတ်ယူခွင့်ကတ်နှင့် အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ တစ်ရက်လျှင် စက်သုံးဆီ (၂၅)လီတာ အောက်တိုဘာ လကုန်အထိ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ အခမဲ့ …
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကြားရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲ ? အိမ်မြှောက် စုတ်ထိုးနိမိတ်
အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကြားရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲ ? အိမ်မြှောက် စုတ်ထိုးနိမိတ် အိမ်မြှောက် စုတ်ထိုးနိမိတ် အိမ်မြှောင်ဆိုတာ ကတော့ နေ့တိုင်းလိုလို စုတ်ထိုးခြင်လည်း ထိုးမယ် တခါတလေမှ ထိုးခြင်မှလည်းထိုးမယ် အဓိက က အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံကို ကြားရသူ အတွက် နိမိတ်စကားလေးတွေကို ရှေးဆရာကြီး များက ဒီလိုအဟောလေးတွေ ထုတ်ထား ခဲ့ပါတယ် (၁) အရှေ့က စုတ်ထိုးသံကြားရင် သူတစ်ပါးရဲ့ အပူဇော်ကို ခံရတတ်ပါတယ် (၂) အရှေ့တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင် မီးလောင်တတ်တယ် ၊ ခန္ဓာကိုအပူလောင် တတ်တယ် ရန်ပေါ် ရတတ်တယ် (၃) တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင် အစားအသောက်ကောင်းများ စားရတတ်တယ် (၄) အနောက်တောင်အရပ်က စုတ်ထိုးသံကြားရင် အချုပ်အနှောင်ခံ ရတတ်တယ် ၊ …
ဆောရီး ..ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးရဲ့ နောင်တ
ဆောရီး ..ဆိုတဲ့ စာတစ်လုံးရဲ့ နောင်တ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးက ငယ်ငယ်လေးတည်းက အတူကြီးပြင်းလာကြ သူတွေဖြစ်တယ်။ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို အမြဲအဖော်ခေါ်ပြီး ရွာပြင်ဖက် ကချောင်းစပ်မှာ ငါးသွားဖမ်းလေ့ရှိတယ်။ ငါးဖမ်းပြန်တိုင်း ကောင်လေးရဲ့ပလိုင်းထဲမှာ ငါးတွေကအပြည့်… ကောင်မလေးမှာတော့ လက်ဗလာနဲ့ ပြန်ခဲ့ရတာ ချည်းပဲ။ ငါးမရခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးက မျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အထိ မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူး။ ညစာစားခါနီး အိမ်ရှေ့တံခါးခေါက်သံ ကြားတော့ ကောင်မလေးက တံခါးဖွင့်ကြည့်တယ်။ တံခါးရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးကိုတွေ့တော့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး လှည့်ထွက်မယ်လုပ်တော့ကောင်လေးက ကပျာကယာရှေ့တက်ပြီး “နင့်ငါးတွေ ငါဖမ်းပစ်လိုက်တာ ဆောရီးနော်. ရော့ ဒါနင့်အတွက်”လို့တောင်းပန်ပြီး ငါးတွေထည့်ထားတဲ့ ဖန်ငါးကန်လေးကို ကောင်မလေးဆီလှမ်းပေးတယ်။ စူနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးပြေလျော့သွားပြီး အပြုံးပန်းတစ်ပွင့် ဖူးပွင့်လာတယ်။ …